Tag: brand kuziva | Martech Zone
Tag: brand kuziva
Makiyi echiitiko Metrics Ose Executive Anofanirwa Kutevera
Chitatu, Kurume 6, 2019 Chitatu, Kurume 6, 2019 Ravi Chalaka
Mushambadzi ane ruzivo anonzwisisa mabhenefiti anouya kubva kuzviitiko. Kunyanya, mune iyo B2B nzvimbo, zviitiko zvinogadzira zvinotungamira kupfuura zvimwe zvekushambadzira. Nehurombo, mazhinji anotungamira haashanduke kuita zvekutengesa, achisiya chinetso kune vashambadziri kuti vavhure mamwe maKPIs kuratidza kukosha kwekudyara muzviitiko zvinotevera. Panzvimbo pekungotarisa zvakazara pane zvinotungamira, vashambadziri vanofanirwa kufunga nezve metric dzinotsanangura kuti chiitiko chakagamuchirwa sei nevanogona kuve vatengi, vatengi varipo, vaongorori uye
Dai ndaizobvuma chero chinhu nezve kushandisa makore makumi maviri ndichitengesa, zvaive zvechokwadi kuti ini handina kunyatsonzwisisa zvinoitika zvechiratidzo pane ese ekushambadzira. Kunyangwe izvo zvingaite senge chirevo chisina musoro, imhaka yekuti nuance yekugadzira mhando kana kuedza kusimba mukugadzirisa maonero echiratidzo kwakanyanya kuomarara kupfuura zvandaimbofungidzira. Kuti utore fananidzo, iyo yakaenzana ichave iri